Momba anay - HuaHeng International Packaging Co., Ltd.
Niorina tamin'ny taona 2009, HuaHeng International Packaging Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina manokana amin'ny fanontana taratasy sy fonosana. Manana teknolojia famokarana sy fitaovana fanodinana tanteraka izy io. Hatramin'ny niorenany, noho ny hevitra famolavolana tsy manam-paharoa mijery lavitra, ekipa fikarohana sy fampandrosoana matihanina matanjaka, ary foto-kevitra momba ny serivisy matihanina, dia nanangona tranga marobe mahomby izy io ary nanome serivisy fonosana ho an'ny orinasa 200+ malaza eto an-toerana.
Miorina amin'ny famolavolana fonosana tokana, fikarohana sy fampandrosoana izahay, famokarana boaty avo lenta, boaty fanomezana, boaty baoritra, boaty PVC, boaty kristaly, marika ary torolàlana. Ao ShenZhen izahay no misy fitaterana mety. Mifantoha amin'ny fanavaozana ny fonosana vokatra Ny vahaolana dia mahatonga ny varotra vokatra ho avo kokoa sy hifaninana bebe kokoa amin'ny orinasa, ary manolo-tena hanome serivisy fiatoana ho an'ny mpanjifa "R&D, fanaporofoana, famokarana ary fitaterana".
Ny orinasan'ny Huaheng dia mirehareha amin'ny maha-tena izy, manavao, mavitrika ary miezaka hatrany ho an'ny mpanjifa rehetra. Ny rafi-pamokarana maoderina sy mitambatra dia ahafahantsika manolotra ny mpanjifanay vokatra avo lenta avo indrindra amin'ny vidiny mifaninana. Ankoatry ny fitazonana fitaovana sy zavatra maro karazana azo ampiasaina, dia asongadinay ihany koa ny programa R&D amin'ny alàlan'ny fananganana Design Center. 75% ny vokatray dia nohararaotin'ny ekipa mpamorona matihanina anay. Isam-bolana dia misy vokatra vaovao atolotra ho an'ny mpanjifa.
Ny mpanjifa miasa dia avy any HongKong, Singapore, Japan, UAE, Russia, Sweden, USA, Canada, Italia, Belzika, Spain, Austria etcs.
Ny orinasa Huaheng dia nanitrikitrika hatrany ny finoan'ny orinasa "Ankasitrahana indrindra, avo lenta, lava toerana", ary mifantoka amin'ny fampandrosoana kalitao mitohy, fanavaozana tsy tapaka ny fotodrafitrasa, fanitarana ny fisian'ny iraisam-pirenena ary fanomezana lanja lehibe hanatsarana ny tombom-bolan'ny mpanjifa.
Resy lahatra izahay fa ny fitaovana be pitsiny dia miantoka ny kalitao tena tsara, ary ekipa matihanina manohana serivisy kalitao! Resy lahatra izahay fa amin'ity fikambanana mpifaninana ity izay miavaka amin'ny "hafainganana haingam-pandeha, fahombiazana avo lenta ary kalitao avo lenta", manana haingam-pandeha miavaka sy kalitao miavaka ianao.
Shenzhen Huaheng Gaosheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. dia nifikitra hatrany tamin'ny fitsipiky ny "kalitao, ny laza aloha" ary manaraka hatrany ny hevitry ny mpanjifa voalohany sy ny fanavaozana. Mitaky ny tombotsoan'ny kalitao tsara izahay, ny vidiny ambany ary ny fandefasana haingana, ary miaraka amin'izay dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fonosana sy fanontana iraisam-pirenena, izay mahatonga antsika hatoky tanteraka ny mpanjifa vaovao sy taloha! Izy io koa dia ahafahan'ny tsenan'ny orinasa manana fanitarana bebe kokoa. Ankehitriny ny mpanjifanay dia any amin'ny faritany mihoatra ny 30, munisipaly ary faritra mizaka tena, ary koa ny faritra Hong Kong, Macao ary Taiwan. Ny vokatray dia amidy amina firenena sy faritra mihoatra ny 30 manerantany. Safidio izahay, hoporofoinay tokoa fa marina ny safidinao.
1. Shenzhen Huaheng Gaosheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. dia mampiasa fitaovana fiarovana tontolo iainana maitso avo lenta mba hahatonga ny boaty fonosana plastika hitafy-mahatohitra, porofo mipoaka, mamirapiratra ary mangarahara, ary saika tsy misy tomika. Ny fizahana kalitao anatiny marobe dia mifehy ny kalitaon'ny vokatra avy amin'ny loharano hahazoana antoka ny fahombiazan'ny famokarana; ny vokatra isam-bolana an'ny vokatra mahazatra ao anaty boaty mifanentana dia mety hahatratra 2 tapitrisa, ary feno kokoa ny fitaovana. Izy io koa dia manome stamping mafana, volafotsy mafana, loko metaly, matte ary lamba Ireo vokatra isan-karazany fanontana manokana, toy ny varimbazaha, ny voam-bary ary ny voam-bolo, dia asehoy amin'ny fomba kanto ny volavolan'ny mpanjifa.
2. Manana faritry ny zavamaniry an'ny tenany efa ho 5500 metatra toradroa izy, nandalo ny fanamarinana isa fanamarinana mpamatsy, manana mpiasa fitantanana feno, hery ara-teknika matanjaka, fikarohana sy fampandrosoana ary famolavolana boaty CTP. . Ny orinasa dia mijery ny safidin'ny vokatra ary mandray fitaovana maloto amin'ny tontolo iainana. Ny vokatra vokatra dia nandalo fanamarinana mari-pahaizana marobe, ary azo antoka ny kalitao. Ny famolavolana maimaim-poana sy ny fanaporofoana maimaimpoana dia azo omena mba hahafeno ny filan'ny mpanjifa amin'ny boaty fonosana.
3. Ny orinasa dia manolotra fitaovana famokarana haitao avo lenta sy fomba fitiliana haitao avo lenta; mandrindra ny rafitra PLC mpandrindra azo arindra mialoha, fomba fanao fanaraha-maso tsotra, mora fikojakojana. Ary ny fitaovana fanontana alemanina vaovao nohafarana avy any ivelany, milina fanontam-pirinty, milina fanapahana maty, milina fanaovana gluing, milina fanaovana hajia mafana, milina fametahana automatique semi-mandeha sy mandeha ho azy, fanapahana taratasy mandeha ho azy, milina fanontam-pirinty, milina fanontana UV ary hafa fitaovana, Fitaovana manohana feno. Haingam-pandeha ny famokarana, ara-potoana ny fandefasana, ary feno kokoa ny vokatra.
4. Avy amin'ny famolavolana, ny famokarana, ny fanontana, ny fanodinana aorian'ny fanodinana, hatrany amin'ny serivisy, mampihatra serivisy mijanona iray izahay, rafitra fitantanana mpanjifa feno, antoka aorinan'ny varotra, avy amin'ny famolavolana vokatra, fitantanana famokarana, fitantanana fandaharam-potoana, fitantanana lojika sy serivisy aorian'ny fivarotana fitantanana. Mikasika ny fanomezana serivisy ho an'ny mpanjifa, ary afaka manome vahaolana amin'ny fonosana vokatra ny mpanjifa, manomboka amin'ny fanaporofoana ka hatramin'ny famokarana ka hatramin'ny famitana ny iray ambiny